“चिनियाँ अन्तरीक्षयात्री अन्तरीक्षमा हिंडे (भिडियोसहित):: Mero Desh
“चिनियाँ अन्तरीक्षयात्री अन्तरीक्षमा हिंडे (भिडियोसहित)
Published on: २२ असार २०७८, मंगलवार ०१:१४
एजेन्सी, २१ असार । चिनियाँ अन्तरीक्षयात्री अन्तरीक्षमा हिंडेका छन् । अन्तरीक्षमा हिंडेको तस्बिर र भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ ।चिनियाँ अन्तरीक्षयात्री उसको अन्तरीक्ष इतिहासमा दोस्रोपटक हिंडेका हुन् । सन् २००८ मा सेन्जु ७ मिसनमा पनि चिनियाा अन्तरीक्षयात्री हिंडेका थिए ।
चिनियाँ अन्तरीक्षयान सेन्जु १२ मा लिउ बोमिङ, टाङ होङबो अन्तरीक्षमा हिंडेका थिए । नि हाइसेङ तेस्रो अन्तरीक्षयात्री हुन् । उनी चाहिं दुई अन्तरीक्षमा हिंड्ने सहयात्रीलाई सहयोग गर्न क्याबिनभित्रै बसेका थिए ।
13 years after #China's 1st spacewalk, #Shenzhou12 Taikonauts conductedaspacewalk mission again. Our step to explore the vast universe never stops. pic.twitter.com/1uRXRCGtzT
— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 5, 2021
यो पनि काठमाडौं, २१ असार नेकपा (एमाले)की नेतृ तथा राष्ट्रिय सभाकी सदस्य कोमल वलीले राष्ट्रिय स”भाको आजको” बैठकमा ‘बाँदरको जमात र अमृतपानको सपना’ शीर्षकमा वाचन गरेको कवितालाई लिएर पनि एमा’लेनिकट पत्रकार संगठनका नेता तथा जनआस्था साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक विश्वमणि सुवेदी रुष्ट बनेका छन् ।
उनले सांसद वलीले एमालेभित्रपनि आफ्नो विचार स’मूह लाई बाँ’दरहरु भनेको भन्दै आफ्नो रुष्टता पोखेका छन् ।” पत्रकार सुवेदीले सामािजक सञ्जाल फेशबुकमा लेखेका छन्-“एमालेभित्र पनि हाम्रो विचार समूहलाई ‘बाँदरहरु’ भन्ने मान्य गायिकाज्यू, यहाँ कहिलेको एमाले ?
यहाँका अनेकन राजनीतिक विचलन र अनैतिक कर्तुत हामीले बाहिर ल्याउनुपर्ने हो ?”सुवेदीले वलीको नाम नै नलिईकन यस्तो लेखेका हुन् । उनले आफ्नो स्टाटसमा गायिकाज्यू मात्रै भनेकर सम्बोधन गरेका छन् उनको लेेख ज”स्ताको तस्तै
यो पनि धोका दिने प्रेमीकालाई पल शाहको भावुक सन्देश।(भिडियो सहित)महामारी होस् वा अन्य प्राकृतिक विपत्ती अ”भिनेता पल शाह सहयोगका लागि संधै अगाडी आउँछन् । उनै नायक पल शाह विपत्तीमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न मुलुकभर पुगेका छन् ।
उनी काठमाडौमा भोकाहरुलाई खाना खुवाउने अभियान मा सकृय छन् भने प्राकृतिक विपत्तीमा परेकाहरुलाई पनि सहयोग लिएर पुग्छन् ।”हाम्रो टिम नेपाल साथै पल शाह फाउण्डेशन मार्फत उनी सामाजिक काममा नै सकृय छन् । उनलाई रिल लाइफमा मात्र नभएर रियल हिरो भन्न थालिए को छ ।
उनलाई रि”यल हिरो अफ दि इ’यरबाट सम्मानित गरिएको छ । रजतपट समुहले उनलाई रियल हिरोको रुपमा सम्मान गरेको हो । ल्यामर गफ उनकै अन्तरवार्तावाट सुरु भएको थियो । प्रकाश सुवेदीले अहिले पनि उनलाई नै अतिथीका रुपमा निम्ता दिए ।”
पल शाहले राजनीतिक दलका नेता भन्दा पू’र्वराजालाई मन पराउँछन् । उनले एउटा घरमा एउटा मात्र अभिभावक हुँदा राम्रो हुने भन्दै नेपालमा अहिले धेरै अभिभा”वक बन्न’ खोज्दा जनताले दुख पाएको बताए । उनले पूर्वराजालाई विष्णु भगवानका रुपमा आफुले बाल्यकाल देखिनै”
मान्दै आएका कारण आफु राजाकै पक्षमा रहेको बताए । मुलुकमा तँ भन्दा मँ के कम ? भन्ने सोँच राजनीतिक दल हरुमा भएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।”उनले अब आफुले अब छिटै विवाह गर्ने पनि बताएका छन् । परिवार मा अप्रत्यक्ष रुपमा विवाहको कुरा ।”
उठ्ने गरेको पनि बताएका छन् । जिवनको तेस्रो दशकमा रहेका उनी आफ्नो जिवनमा कसैलाई माया भने गरेको” बताए । “” टिभीमा काम गर्दा सहकर्मीलाई आफुले” निकै मन पराएको भएपनि केही महिना मात्र रहेको बताए । त्यसपछि अर्कोसंग दोहोरो प्रेम भएपनि त्यो प्रेम पनि छुटेको बताए ।”
“आफुले मन पराएको ब्यक्तिसंगको प्रेम सफल हुन नपाए पछि निकै दुखी भएको बताए । ए”क अर्कालाई बुझ्न” नसकेका कारण दोहोरो प्रेम छुटेको उनले बताए । पहिलो पटक उनले आफ्नो प्रेमको बारेमा बताएका छन् । उनले केही वर्ष (चार वर्ष)”
प्रेम चलेको र त्यो छुट्दा निकै दुखी भएको बताए । उनले आफ्नो पूर्व प्रेमीकालाई सन्देश दिँदै भने,अब फर्केर नआउ जहाँ छौ त्यतै खुसी रहनु । म यतै खुसी छु । भन्दै सन्देश पनि छाडेका छन र केहि छिन पल प्रेमिकालाई सम्झेर पनि भावुक समेत बनेका छन बाकी भिडियोमा हेर्नुस।्